Kulankii Baarlamaanka oo Markale Buuq iyo Fowdo Kusoo Idlaaday,Xukuumadda oo Cod loo qaadayo.
Monday November 24, 2014 - 11:20:25 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya xarunta baarlamaanka daauuqdka magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in buuq iyo sawaxan xooggan uu ka dhacaygudaha xarunta kadib markii lasoo bandhigay mooshinka ka dhanka ah Cabdi Wali Sheekh.
Wariyaal ku sugan xarunta kulanku ka socdo ayaa xaqiijiyay in xildhibaanada taabacsan R/wasaaraha ay markale jeex jeexeen liiska lagu xaadirinayay xildhibaanada iyo nuqullo kamid ah mooshinka oo taageerayaasha Xasan Sheekh horay loogusoo qeybiyay.
Max'med Cismaan Jawaari guddoomiyaha baarlamaanka ayaa isku dayay in uu joojiyo buuqa ay sameynayeen xildhibaanada dhanka R/Wasaaraha ujanjeera balse waa ku guul darreystay isagoona markii dambe goobta isaga cararay.
Wararkii ugu dabeeyay ayaa sheegaya in xildhibaanadu ay si hal haleel ah uga dhaqaaqeen goobta waxaana lafilayaa in Jawaari uu war rasmi ah kasoo saaro wixii maanta ka dhacay xarunta baarlamaanka DF-ka ee gumeystaha la shaqeysa.
Xoogaga Al Shabaab oo markale lawareegay deegaanka Diif ee Jubbada Hoose.
Axmed Madoobe oo markale Abaabul ciidan ka bilaabay Jubbada Hoose.
Imaaraadka oo Dekedda Berbera kusoo Celiyay Xoolo 50 Maalmood ka hor laga iibiyay!
Ciidamada Itoobiya oo degmada Diinsoor kusoo dhaweeyay Laftagareen!! Aaway Ciidankii Soomaaliyeed? (Warbixin)
Weerar Madaafiic ah oo Markale lagu qaaday Xerada Xalane.